प्रधानमन्त्री ओलीमा राजनीतिक इमान्दारिता र नैतिकता कत्ति पनि देखिएन : शेखर कोइराला – Kendra Khabar
२०७७, ३० चैत्र सोमबार १४:५६
नेपाली कांग्रेसका नेता डा. शेखर कोइरालाले केपी शर्मा ओलीमा नैतिकता नदेखिएको बताएका छन् । प्रधानमन्त्री ओलीमा राजनीतिक इमान्दारिता भएको भए संसद पुनस्थापना हुनासाथ राजिनामा दिनुपर्ने थियो । प्रधानमन्त्री ओलीले नैतिकता नदेखाउँदा समस्या आएको उनले टिप्पणी गरे ।
नेपाली राजनीतिज्ञमा नैतिकताको खडेरी देखिएको भन्दै उनले प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीमा राजनीतिक इमान्दारिता र नैतिकता कत्ति पनि नभएको आरोप लगाए । उनले भने, ‘संविधान कुल्चिएर प्रधानमन्त्रीले गरेको संसद विघटनको निर्णय सर्वोच्च अदालतले रोकिदिएपछि प्रधानमन्त्रीले नैतिकताको आधारमा राजीनामा दिनुपर्नेमा झनै तर्क गरे । त्यसैले प्रधानमन्त्री ओलीले नैतिकता गुमाए ।’
ओली नेतृत्वको वर्तमान सरकार जति समय रहन्छ, त्यति नै अराजकता बढदै जाने कोइरालाले बताए । , प्रेस युनियन कास्कीले सोमबार आयोजना गरेको पत्रकार भेटघाट कार्यक्रममा बोल्दै कोइरालाला यो सरकारको विकल्प नदिने हो भने संसद नै अफाफ सिद्ध हुने धारणा राखे ।
ओली सरकार हटाउन प्रमुख प्रतिपक्षी दल कांग्रेसले पनि जुन खालको पहल गर्नु पर्दथ्यो त्यो नभएको उनले स्विकार गरे । ‘राजनीतिमा नैतिकता भएको भए प्रधानमन्त्री ओलीले संसद पुनस्थापना भएकै दिन राजिनामा दिनुपर्थ्यो । उहाँले नैतिकता देखाउनु भएन । कांग्रेसले पनि जुन खालको पहल गर्नुपर्थ्यो त्यो गरेन’ उनले भने ।
कोइरालाले प्रमन्त्रीसंगै सभामुखको भूमिकालाई लिएर पनि आक्रोस पोखे । प्रधामन्त्रीले राजिनामा पनि नदिने अनि संसदलाई पनि काम गर्न नदिने काम गरेको उनले बताए । त्यसमा सभामुख अग्निप्रसाद सापकोटा पनि मुकदर्शक बनेको उनको आरोप छ । सरकारले विजनेश नदिँदा पनि सभामुखले आफ्नो अधिकार प्रयोग गर्न नसकेको बताए ।
‘सरकारले विजनेस नदिएपनि सभामुखको पनि केही भूमिका हुनुपर्ने हो । तर, सभामुख आफैले गर्नुपर्ने काम पनि गर्नुभएन । उपसभामुख चयन गर्नेकाम सरकारको होइन । सभामुखको हो । उहाँले त्यो पनि गर्नुभएन ।
नेता कोइरालाले अबको मंसिर या चैतमा निर्वाचन गर्नुपर्ने बाध्यता रहेको सुनाए । कांग्रेसको नेतृत्वमा सरकार गठन गर्नुपर्ने र देशलाई निर्वाचनमा लैजानुपर्ने उनको भनाई छ । अहिलेकै अवस्थामा संसद राख्नुको समेत औचित्य नहुने उनले बताए ।
जसपाका एजेन्डालाई सम्बोधन गर्न विगतमा कांग्रेस सरकारले संसदमा प्रस्ताव लगेको स्मरण गर्दै उनले ‘त्यसका विरोधी एमाले अध्यक्ष ओलीले कसरी जसपाका एजेन्डा सम्बोधन गर्न सक्छन ? र महन्तजीहरु ओली तर्फ नरम बनिरहनुभएको छ’ ।
जनता समाजवादी पार्टीलाई मनाउँदा कांग्रेस नेतृत्वको सरकार भोली नै गठन हुन सक्छ । यद्यपी जसपाकै नेता ठाकुरको नेतृत्वमा सरकार गठन गरेरै भएपनि ओली सरकारलाई विदा निनुपर्ने उनले बताए । ‘सकेसम्म कांग्रेसकै नेतृत्वमा नयाँ सरकार बनाएर निर्वाचनमा जाने हो । नभए महन्तजी कै नेतृत्वमा भएपनि अर्को सरकार गठन गरेर यो सरकारलाई विदा दिनुपर्छ’ उनले भने ।
उनले भने, जसपाका संविधान संशोधन लगायतका मागहरु कांग्रेस र माओवादीले पहिले नै पूरा गर्न खोज्दा एमालेले नै विफल पारेको हो । यस्तो अवस्थामा फेरि एमालेसंगै सहकार्य हुन खोज्नु राष्टका लागि निकै घातक हुन सक्छ ।
कांग्रेसले सरकारको नेतृत्व गर्ने र मुलुकलाई चुनावमा लैजाने सुल्टो बाटो हुने भन्दै नेता कोइरालाले जसपाले नै सरकार नेतृत्व गरे पनि आफूलाई आपत्ति नहुने बताए । पार्टी सभापति शेरबहादुर देउवा ओलीसंग नजिकिएको भन्दै जनताले शंकाको घेरामा राख्नु झनै विडम्वना भएको भन्दै उनले यसको जवाफ सभापतिले दिनुपर्ने स्पष्ट पारे ।